Mmanụ ndị dị mkpa bụ osisi ndị sitere na okooko osisi dị ọcha, epupụta, peels, mkpụrụ, alaka na akụkụ ndị ọzọ, na mkpụrụ osisi aromatic. A na-echekwa njirimara nke osisi dị ọcha na-enweghị ihe mgbakwunye ọ bụla nke agbakwunyere. Ọ nwere mmetụta pụrụ iche na akpụkpọ, ahụ na mkpụrụ obi. Molek ...
Mmalite na akụkọ ihe mere eme nke mmanụ dị mkpa
China bụ n'ezie mmepeanya oge ochie nke izizi jiri ahịhịa na-esi ísì ụtọ wee nwee ahụ ike. A na-eji osisi eme ihe n'oge ochie, na-eji ihe ọkụkụ agwọ ọrịa, na-esure ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ iji mee ka nkwekọrịta na nhazi nke anụ ahụ na nke uche. . Ime anwansi nke uwa enyela anyi conti ...
Mee 2014 ngosi mgbanwe ahia
Trade Show Aha: 72th API China Attbọchị Gara: 2014 .5 Mba ndị ọbịa / Mpaghara: CN Okwu Mmalite: API China nwere ngalaba P-MEC, ICSE, LABWorld, InnoPack, BioPh na ebe atụmatụ maka Natural Extracts na EP CLean Tech. Anyị guzobere na 2006 na ọkachamara na n'ichepụta natura ...
June 2014 ahia mgbanwe ngosi
Trade Show Aha: 14th CPHIchina Attbọchị Gara: 2014 .6 Mba ndị ọbịa / Mpaghara: CN Okwu Mmalite: CPhI China na P-MEC, ICSE, LABWorld, InnoPack, BioPh na mpaghara atụmatụ maka Natural Extracts na EP CLean Tech. Anyị guzobere na 2006 na ọkachamara na n'ichepụta natur ...